New York: Wiish dheer oo kusoo dhacay bartamaha magaalada oo keenay dhimasho & dhaawac [Daawo] - iftineducation.com
New York: Wiish dheer oo kusoo dhacay bartamaha magaalada oo keenay dhimasho & dhaawac [Daawo]
iftineducation.com – Wiish dheer oo ka shaqeenayey mid kamid ah daaraha dhaadheer ee magaalada New York ayaa Jimcihii shalay dhulka kusoo dhacay, shilkaasi oo uu ku dhintay ugu yaraan hal qof. Dad gaaraya 15 qof ayaa sidoo kale ku dhaawacmay shilkan.
Wiishkan oo ka shaqeenayey mid kamid ah daaraha ku yaal koonfurta bartamaha New York ee Manhattan ayaa soo dhacay xili ay magaaladaasi ka dhacayeen dabeylo xoogleh, waxaana la sheegayaa in dabeylahaasi keeneen burburkan.
Qofka dhintay ayaa ku jiray gaarigiisa kadib markii uu wiishka kasoo dul dhacay, waxaana khasaaro soo gaaray qaar kamid ah daaraha kale ee goobtaasi ku yaal iyo waliba wadooyinka oo ay kusoo dhaceen dhagaxaan iyo quraarado, booliiska ayaa gebo ahaan xiray wadooyinka taga goobta uu shilka ka dhacay.
Duqa magaalada New York Bill de Blasio ayaa sheegay in arrintan ay tahay shil xun isla markaana ay socoto baaritaan ku aadan habka wiishkan usoo dhacay.
Shilkan oo kale ayaa sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay Masjidka Barakeysan ee Xaramka Makah al Mukaramah kadib markii wiish noocaan oo kale uu kusoo dhacay Masjidka goobtaasi oo ay ku dhinteen dad ka badan 100 qof, xiligaasi ayaa sidan oo kale la sheegay in dabeylo xoogbadan ay soo rideen wiishkaasi.
Dhul gariir xoogan oo ku dhuftay Koofurta dalka Taiwan (Sawirro)
AL SHABAAB OO MARKALE DIB ULA WAREEGTAY MAGAALADA MARKA, CIIDAMADA DOWLADDA IYO AMISOM AYAA DIB U GURASHO SAMEEYAY